PRO-X GROUP OF COMPANIES LIMITED (Tamwe, Myanmar) - Contact Phone, Address
PRO-X GROUP OF COMPANIES LIMITEDNo-398(B), 7-Fl, Banyar Dala Street, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.+959 778915075https://www.myanmaryp.com/img/site/default-business2.jpg
Company manager Ye Tay Zar Shein
Good Customer Relationship and talent software company
Have questions? Get answers from PRO-X GROUP OF COMPANIES LIMITED or MyanmarYP.com users. Visitors haven’t asked any questions yet.
No-398(B), 7-Fl, Banyar Dala Street, Tamwe Township, Yangon, Myanmar., Tamwe, Yangon Get Directions
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ဘာလို့ Website ဆိုတာလိုအပ်တာလဲ? ၁။ လုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးအမြတ်ရှိခြင်း။ ၂။ Website က ပိုက်ဆံအကုန်အကျ သက်သာခြင်း။ ၃။ Customer တစ်ယောက်ချင်းစီကို သတင်းပေး အကြောင်းကြားစရာမလိုအပ်ခြင်...
PRO POS ဆိုတာ လက်လီ၊ လက်ကား အရောင်းဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ စတိုးဆိုင်၊ ကုန်စုံဆိုင်၊ ဆေးဆိုင်၊ ဖုန်းဆိုင်၊ အလှကုန်ဆိုင်၊ အထည်ဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ Cafe ဆိုင်များ၊ စက်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များ အတွက...
ကိုယ်ပိုင် Products များကို Online မှ တစ်ဆင့် ရောင်းချလိုသူများ၊ E-commerce လုပ်လိုသူများ၊ Online Shopping ပြုလုပ်လိုသူများ အတွက် ကိုယ်ပိုင် Website (or) Mobile Apps မှတစ်ဆင့် Customer များအလွယ်အကူ ဝယ...
proxpro-xpro-x softwarepro-x software solutionSoftware company
PRO-X GROUP OF COMPANIES LIMITED - company profile is confirmed by company owner / representative person / directory administrator.
Related Companies to PRO-X GROUP OF COMPANIES LIMITED
Search Results Related to PRO-X GROUP OF COMPANIES LIMITED
Advertising in TamweAdvertising Software in TamweComputer Software Solution in TamweInformation Technology in Tamwe